mubvunzo Madekwana Yose
1 gore 1 mwedzi wapfuura #924 by mickod88
Manheru Masikati Shamwari!
Wakava nhengo ye Rikoooo ikozvino kwemwedzi inopfuura 6, pakupedzisira akazouya kusvika pakuzvizivisa ini sezvo ini ndisiri kure zvakanyanya iye zvino kuti ndiwane imwe nguva yakanaka P3D pasi pebhanhire rangu zvakare!
Zita rangu ndiMick, uye ini ndiri kuLossiemouth kuScotland, iye zvino ndiri kushanda seAvionics Technician ne RAF. Ndichitarisira mberi kudzidza zvakawanda pamusoro peP3D kubva kune vane ruzivo uye ndine tariro saka ndopfuurira ruzivo rwangu kune dzimwe dziva itsva munguva yemberi.
1 gore 1 mwedzi wapfuura - 1 gore 1 mwedzi wapfuura #925 by rikoooo
Kugamuchirwa kumusangano, thank you for introducing yourself.
Ndinotarisira kuti muchafarira iyi forum, iyo yese musangano ichitsva uye inoda mamwe mabasa saka ndapota musanono kutumira pano uye kuunza zivo yako inokosha kune vamwe.
Last edit: 1 gore 1 mwedzi wapfuura rikoooo.
1 gore 1 mwedzi wapfuura #926 by Gh0stRider203
Aye, ini wechipiri icho! Gamuchira, uye ndinokutendai nokuda kwebasa renyu!
Time chokusika peji: 0.179 mumasekonzi